ReadSasaza ukuBheja ngeNzuzo enkulu! - Funda nge-2 yoRhwebo ngoJanuwari 2022
Funda ngesiKhokelo se-2 soRhwebo ngo-2021 xa usasaza iMali!
Ukuhlaziywa: 5 Juni 2021
Ukusasaza amaqonga okubheja kukuvumela ukuba uqikelele kwixabiso elizayo lesixhobo semali ngaphandle kokuba ungumnini weasethi. Oku kubandakanya yonke into ukusuka kwigolide, ioyile, igesi yendalo, izitokhwe, ii-indices kunye nee-cryptocurrensets.
Umxholo ophambili kukuba kufuneka umisele ukuba ucinga ukuba i-asethi iya kunyuka okanye yehle ngokunxulumene nexabiso langoku. Ukuba uchanekile, inzuzo yakho ibalwa ngokuthatha indawo yakho yenqaku, ngenqaku lamanqaku i-asethi inyuswe ngawo.
Abahwebi bahlala bekhetha sasaza ukubheja kuba kwi iblorho Imimandla yolawulo- iinzuzo azifikelelwa rhafu. Ngaphaya koko, ayisiyiyo kuphela ukuba ungarhweba ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini, kodwa ukusasazeka kuhlala kukhuphisana ngakumbi kuneendlela zemveli zotyalo mali.
Ngale nto ithethwayo, ukusasaza ukubheja kunokubonakala kudidekile ekuqaleni xa ungazange udibanise kwisithuba. Kananjalo, singacebisa ukuba sifunde isiKhokelo esiFundwayo soRhwebo esiyi-2 soSasazo ekuBhejeni-apho sichaza khona yonke into ekufuneka uyazi.
Qaphela: Nangona ukusasazeka kweendawo zokubheja kukuvumela ukuba urhwebe ngaphezulu kwe-akhawunti yakho ngenkqubo yemida, oku kukwathetha ukuba uya kulahla isibonda sakho xa urhwebo lwakho luphelisiwe.
Ukusasaza ukubheja luhlobo lokurhweba- olufana nolo lwee-CFDs. Kungenxa yokuba uya kuba nokufikelela kumawaka ezixhobo zemali, onokuthi urhwebe ngazo ngaphandle kokuthatha ubunini be-asethi. Umbono ophambili kukuba kufuneka ucinge ukuba ingaba i-asethi iya kunyuka okanye yehle kwixabiso- ngokunxulumene nexabiso langoku lentengiso.
Umzekelo, ukuba i-FTSE 100 ithengisa ngamanqaku angama-2,700 - i-oda 'ende' iya kubonisa ukuba ucinga ukuba isalathiso siya kunyuka ngexabiso. Ngenye indlela, ukuba ubeke umyalelo 'omfutshane', ucinga okwahlukileyo. Ngaphambi kokuba ubeke iodolo yakho, kuya kufuneka ungene kwisibonda.
Kwilizwe lokusasaza ukubheja, ubungakanani bakho bezorhwebo bubonakaliswe njenge 'point-point-point' nganye. Ke, kwinqaku ngalinye olichanekileyo okanye elingalunganga ngo, liphindaphindwe ngesibonda sakho. Umzekelo, ukuba ubeke i-1 ngephuzu nganye kwi-FTSE 100, kwaye uvale urhwebo ngamanqaku angama-2,800, oku kuya kuthetha ukuba uphumelele i- $ 100.
Kungenxa yokuba i-FTSE 100 igqibe ngamanqaku ayi-100 aphezulu (2,800 - 2,700), kunye nenqaku lakho ngalinye nge-1. Kwelinye icala lesiphelo, ukuba uhambe mfutshane- ilahleko yakho iyakuma kwi-100 yeepawundi- njengoko ubuphosakele ngamanqaku ayi-100.
Zintoni iingenelo kunye neengozi zokusasaza ukubheja?
Inzuzo ihlala ikhululwa kwirhafu
Ukufumana ukubonwa kumawakawaka ezixhobo zemali
Ukukhetha ukuhamba ixesha elide kwaye kufutshane kutyalo-mali lwakho
Ukusasaza abathengisi bokubheja banikezela ngokurhweba ngaphandle kwentlawulo
Urhwebo ngaphezulu kakhulu kunokuba unayo kwiakhawunti yakho ngomgama
Akukho mda kumandla akho aphezulu
Kuyingozi kakhulu kunorhwebo lwesitokhwe lwesiqhelo
Ungaphulukana nesibonda sakho kurhwebo olunye
Ukusasaza ukubheja kusebenza kwinkqubo yamanqaku, apho iinzuzo okanye ilahleko yakho isekwe kwinani lamanqaku obengaphezulu okanye ngaphantsi kurhwebo. Udidekile? Ewe, masithi uthengisa izitokhwe zeNike ngeedola ezingama-85.50. Kwimeko yokusasaza ukubheja, i-85.50 yeedola iya kuguqulela kumanqaku angama-85.5. Emva koko, masithi uhambe 'ixesha elide', okuthetha ukuba ucinga ukuba izitokhwe zeNike ziya kunyuka ngexabiso.
Ukuba uvale urhwebo lwakho xa i-Nike ibixabiso kuma-87.0 amanqaku (okanye i- $ 87.00), urhwebo lwakho lokubheja lwaphumelela ngamanqaku ayi-15. Kungenxa yokuba kulo mzekelo-inqaku ngalinye lalisekwe kuyo yonke i-0.10 yeedola ukuba isitokhwe senyuka. Ke, ukuba sibambe ipawundi enye ngenqaku, ngesele sihambile ngenzuzo ye- $ 1 (amanqaku ayi-15 x £ 15).
Kwangokunjalo, ukuba ubambe i-5 yeponti ngenqaku ngalinye, urhwebo lwakho lwestokhwe oluphumeleleyo lwe-Nike ngelufumene i- £ 75 kwinzuzo (amanqaku ali-15 x £ 5). Kukho, ewe, kunokwenzeka ukuba ukurhweba kwakho ngokubheja ngamanye amaxesha kuya kulwa nawe. Ngamanye amagama, ukuba ixabiso lezitokhwe zakwaNike lihambile phantsi, ngekhe ulahlekelwe yimali.
Umzekelo, masithi ukhuphe urhwebo lwakho xa i-Nike ibixabiso nge $ 82.50. Njengoko oku kuguqulela kwilahleko yamanqaku angama-30 (85.5 - 82.5), isibonda se- £ 1 ngekhe siphulukane ne- £ 30. Ngapha koko, akukho mda kwimali onokuyiphulukana nokusasaza ukubheja- njengoko urhwebo lusekwe kumda.
Makhe sijonge eminye imizekelo embalwa ukucima ukungcola okubheja.
🥇 Umzekelo woSasazo lwezeNtengiso oluyimpumelelo
Kumzekelo wethu wokuqala, siza kuthengisa ioyile. Sicinga ukuba kwiidola ezingama-28.0 ngebharele, ixabiso lazo lixabiseke kakhulu. Ngamahemuhemu okuphungulwa kwemveliso yi-OPEC kunye neRussia, ugqiba kwelokuba uhambe ixesha elide. Oku kuthetha ukuba ucinga ukuba ixabiso leoyile liya kunyuka xa kuthelekiswa nexabiso langoku le- $ 28.0- okanye amanqaku angama-28.0.
Ubeka iodolo ende kwioyile nge- $ 5 ngenqaku ngalinye
Oku kuthetha ukuba kuyo yonke inqaku (okanye $ .10) ioyile inyuka okanye yehle ngexabiso, uya kuphumelela okanye uphulukane ne- £ 5
Kwiiyure ezimbalwa emva koko, iirokethi zesibhakabhaka seoyile zaya kuthi ga kwiidola ezingama-33.50, okanye amanqaku angama-33.50
Oku kufikelela kumanqaku angama-55 Kaninzi kunamanqaku angama-28.0 owathathileyo xa ubeka iodolo yakho (khumbula, amanqaku asekwe kwinani emva kwenqaku lokugqibela).
Kananjalo, uphumelele i- $ 275 kolu rhwebo.
Kungenxa yokuba amanqaku angama-55 akuthandayo ngokuchasene nesibonda se- $ 5 ngenqaku ngalinye lifikelela kwi- £ 275
Njengoko besitshilo ngaphambilana, ukurhweba ngokubheja akusayi kuhlala kukuthanda-ke ngoku kufuneka sijonge umzekelo ongaphumelelanga.
🥇 Umzekelo woSasazo lwezeMali lokuBheja olungaphumelelanga
Ukugcina izinto zilula, siya kubambelela kumzekelo ofanayo njengasentla, apho ixabiso leoyile lixabisa ama- $ 28.0 okanye amanqaku angama-28.0. Kuphela ngeli xesha, izinto azizukucwangcisa.
Kwiiyure ezimbalwa kamva, ioyile yengozi yaya kuthi ga kwi-26.00 yeedola, okanye amanqaku angama-26.0
Njengamaxabiso okuqala ayengamanqaku angama-28.0, kwaye okwangoku ikwi-26.0-oku kuguqulela kwilahleko yamanqaku angama-20
Kananjalo, ulahlekelwe yi- $ 100 kolu rhwebo
Kungenxa yokuba amanqaku angama-20 ngokuchasene nawe kwisibonda se- $ 5 ngenqaku ngalinye lifikelela kwilahleko ye- $ 100
Lo ngumzekelo ophambili wokuba kulula kangakanani ukuphulukana nemali xa usenza ukubheja. Kwiphepha le-flip, unokuwunciphisa ngokulula umngcipheko ngokufaka i-odolo yokuyeka ilahleko. Njengoko sigubungela ngakumbi kamva, oku kukuvumela ukuba uphume ngokuzenzekelayo kurhwebo lwakho xa iimarike ziye ngokuchasene nawe yipesenti echazwe kwangaphambili.
Ngawaphi amaMakethi onokurhweba kuwo xa usasaza ukubheja?
Ngokufana ne-CFDs, abathengisi ababhejayo abasasazayo bakunika ukufikelela kumawakawaka eemarike zezemali. Oku kuqinisekisa ukuba uyakwazi ukwenza ipotifoliyo ebambeleyo yokubamba - iiyure ezingama-24 ngosuku.
Apha ngezantsi sidwelise ezinye zeeklasi zeasethi ezaziwa kakhulu onokuzithengisa kwindawo yokubheja esasazekileyo.
Amasheya: Ungasasaza ukubheja amawaka eblue-chip equities kwiindawo ezininzi zentengiso. Cinga kwimigca ye-LSE, NASDAQ, kunye ne-NYSE.
Ama Indices: Ukuba ufuna ukuthengisa iimarike ezibanzi zesitokhwe, usasaze amaqonga okubheja nawo abambe ii-indices. Oku kubandakanya i-S & P 500, iDow Jones, i-FTSE 100, kunye ne-NASDAQ 100.
Amandla: Unokuthengisa amandla. Oku kubandakanya iimarike eziphambili zeoyile kunye negesi yendalo.
Iintsimbi ezinzima: Indawo enzima yesinyithi ibandakanya yonke into esuka kwigolide, ioyile kunye nobhedu.
Ezolimo: Ukuba ufuna ukufumana ukuvela kwiimveliso zezolimo ezifana nengqolowa, izityalo, iswekile, kunye neenkozo-zisasaza amaqonga okubheja axhasa ezi marike.
Ii-ETFs: Ukuqhubela phambili ukuqaqambisa ukuba asasazeka kangakanani amaqonga okubheja- unokuthengisa ii-ETFs.
Iimali: Uhlobo olufanayo kwiindawo zokurhweba kwangaphambili, abathengisi bokubheja abasasazekayo bakwakuvumela ukuba uqikelele kwicala elizayo lezibini ezidumileyo zemali njenge-GBP / USD kunye ne-EUR / USD.
Iimali zemali zedijithali: Abanye basasaza iindawo zokubheja zikwavumela ukuba uthengise ixabiso elizayo lwee-imali ezixabisekileyo ezinje ngeBitcoin ne-Ethereum.
Ukusasaza Ukubheja-Amagama aphambili
Ke ngoku ukuba uyazi iziseko zokusasaza ukubheja, ngoku kufuneka sijonge amanye amagama aphambili onokuthi-kodwa-uqiniseke ukuba uza kudibana nawo.
Okokuqala nokuphambili - qiniseka ukuba uyayazi iminqweno yakho kwiifutshane zakho. Njengoko sigubungele ngokufutshane ngaphambili, ukuhamba ixesha elide kwintengiso kuthetha ukuba ucinga ukuba iasethi iya kwenza njalo Nyusa Ngexabiso. Oku kuyafana nokubeka i-oda 'yokuthenga' xa uthengisa ii-CFD, okanye 'ukhetho lokufowuna' xa utyala imali kwisivumelwano sokukhetha.
Ukuba uye wafutshane kwintengiso yokubheja, oko kuthetha ukuba ucinga ukuba i-asethi iya kuhla ngexabiso. Kwakhona, oku kuya kulingana 'nokuthengisa' iodolo xa kuthengiswa iiCFD, okanye 'ukubeka ukhetho' kwifayile ye- ukhetho lokurhweba indawo.
Ukunyusa kunye noMda
Ukusasaza amaqonga okubheja akuvumela ukuba urhwebe ngemali eninzi kunokuba unayo kwiakhawunti yakho. Umzekelo, masithi ufuna ukuthenga i-Disney ezixabisa i-1,000 1,000 zeepawundi. Ngokwesiqhelo, ukuba uthenge izabelo ezixabisa i-1,000 XNUMX kwi-stockbroker ekwi-Intanethi, uya kufumana izabelo ezixabisa i- £ XNUMX.
Nangona kunjalo, ukusasaza iindawo zokubheja zikuvumela ukuba ufake isicelo kubarhwebi bakho- ke imali yakho eseleyo eyi- $ 1,000 iya kukuvumela ukuba urhwebe ngakumbi.
Masithi uyacelwa ukuba ubeke umda we-10% ezantsi kwintengiso yeDisney
Umda wakho ngokuyintloko uyidiphozithi engabuyiswayo umrhwebi ayigcinayo ukuba urhwebo lwakho luchasene nawe ngenani elithile
Une- £ 1,000 10,000 kwiakhawunti yakho, ekuvumela ukuba uthengise nge- $ XNUMX esitokhwe kwiiDisney
Kungenxa yokuba i- £ 1,000 ixabisa ukuya kwi-10% yemida efunekayo
Ngokubalulekileyo, ukurhweba kumda kungahamba yenye yeendlela ezimbini. Ungaphumelela urhwebo lwakho lokubheja olusasazekileyo kwaye wandise ii-winnings zakho, okanye upheliswe kwaye ulahlekelwe ngumda wakho.
Umzekelo, ukuba uye wahamba ixesha elide kwizitokhwe zeDisney kwaye ixabiso lonyuka nge-20%, ngewawenze inzuzo iyonke ye- $ 200 (20% ye- £ 1,000). Nangona kunjalo, njengoko ufake isicelo somyinge we-10: 1, inzuzo yakho yayingu- £ 2,000 (£ 200 x 10).
Ukuba iimarike ziye kwelinye icala, kwaye izitokhwe zeDisney zehle nge-10%, ngelahlekile. Kananjalo, urhwebo beluya kupheliswa kwaye umrhwebi ngewayewugcinile umgama wakho we- £ 1,000.
Njengayo nayiphi na omnye Umjelo wotyalo mali kwiimarike zemali, kufuneka ube uqonde ngokuqinileyo 'ukusasazeka' xa usasaza ukubheja kwi-intanethi. Kwabo abangaziyo, lo ngumahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nokuthengisa leasethi. Kwimeko yokusasaza ukubheja, ngumahluko phakathi kwexabiso lokungena 'elide' kunye 'elifutshane' - kwaye ihlala ichazwa kumanqaku.
Umzekelo, masithi uthengisa ioyile.
Ixabiso elide li- $ 27.0
Ixabiso elifutshane li- $ 27.3
Oku kufikelela kummahluko wamanqaku angama-30, angaphezulu nje kwe-1%
Ngokomzekelo ongentla, oku kuthetha ukuba kufuneka uzuze ubuncinci ngamanqaku angama-30 (1.11%) kurhwebo lwakho lokubheja olusasazekayo ukuze uphule. Oku kuyabiza.
Iindaba ezimnandi zezokuba abathengisi bokubheja abasasazekileyo bacetyiswa kweli phepha banikezela ngokusasazeka okukhoyo ngokuphawulekayo ukhuphiswano ngakumbi kunolu.
Kuya kufuneka uphinde uvavanye 'ixesha lokubheja' ngaphambi kokubeka urhwebo lokusasaza. Njengoko igama libonisa, oku kubhekisa kwixesha lokubheja kwakho. Oku kuhlala kuza kwenye yeendlela ezimbini-ukubheja okufumana inkxaso-mali mihla le okanye ukubheja ngekota.
Ubhejo lwemihla ngemihla: Eli xesha libalulekileyo lokubheja lilungele abo banqwenela ukuzibandakanya urhwebo usuku. Kungenxa yokuba kuya kufuneka uhlawule iifizi zokulala ubusuku ngabunye yonke imihla ogcina ukuba urhwebo lokubheja lusasazekile. Emva kwayo yonke loo nto, uya kuhlala urhweba ngomda xa usebenzisa indawo yokubheja esasazekayo, eza ngendleko. Ukusasazeka kuhlala kumazantsi.
Ukubheja ngekota: Ukubheja ngekota kulunge ngakumbi kwabo banqwenela ukugcina urhwebo luvulekile ixesha elide. Kungenxa yokuba awuyi kuhlawuliswa umrhumo ogqithileyo wosuku ngalunye ogcina urhwebo luvulekile. Kananjalo, unokugcina urhwebo lwakho lokubheja lusasazekile ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-3 ngaphambi kokuba luvale ngokuzenzekelayo. Ukusasazeka kuhlala kuphezulu.
Ukufumana utywala kuLwabiwo lweeNtengo
Umngcipheko omkhulu ojamelana nawo xa usasaza ukubheja kukuba urhwebo lwakho luphelisiwe. Nangona sigubungele ngokufutshane ukuba isebenza kanjani le nto ngaphambili, kubalulekile ukuba sandise. Emva kwayo yonke loo nto, urhwebo oluphelisiweyo luya kukhokelela ekuphulukaneni nomda wakho wonke.
Ke, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuvavanya ukuba mngakanani umgama esinyanzelekileyo ukuba siwenze ngokweepesenti.
Umzekelo, masithi uthengisa i-Apple stocks, eneemfuno zomda we-10%
Ufuna ukurhweba nge- £ 5,000 yeesitokhwe, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka ubeke umda we- $ 500
Ngalo lonke ixesha urhwebo luhlala luvulekile, awunakuchukumisa le £ 500, njengoko ithathiwe kwi-akhawunti yakho eseleyo ibekwe kwiakhawunti yakho yomda
Kwelinye icala, kulungile ukuba uyakwazi ukurhweba nge- $ 5,000 esitokhwe sika-Apple ngokubeka idiphozithi nje eyi- $ 500 ezantsi. Nangona kunjalo, ukuba iimarike zihamba ngokuchasene nawe, loo £ 500 isengozini yokulahleka ngokupheleleyo. Ngapha koko, oku kuyakwenzeka ukuba ixabiso leApple lehle nge-10%, kuba oku kuya kufikelela kunciphiso lwehlabathi lokwenyani le- $ 500.
Ngaphambi kokuba ufike kwinqanaba lokupheliswa, umthengisi wokubheja osasazekileyo uya kukunika ithuba lokongeza imali kwiakhawunti yakho yomda. Umzekelo, ukuba wongeze enye i- $ 200, oku kuya kufuna ukuba ixabiso lesitokhwe seApple lehle nge eyongezelelweyo I- £ 200 ngaphambi kokuba urhwebo lwakho luvaliwe.
Kwiphepha le-flip, ukuba ukhethe ngokuchasene nokongeza imali kwi-margin yakho, kwaye urhwebo lwakho lwe-Apple lubethe ixabiso le-10% lokurhoxisa ixabiso, umrhwebi uza kuvala urhwebo lwakho kwaye agcine umda wakho we- $ 500.
Ukubeka i-Order Stop-Loss Order
Iindaba ezimnandi zezokuba ungafaka i-odolo yokuyeka-ukulahleka ukuze uqiniseke ukuba awuzukucinywa. Endaweni yoko, unokukhetha ukuphuma kurhwebo lwakho lokubheja xa i-asethi ichasene nawe ngenani elincinci. Umzekelo, endaweni yokuba urhwebo lwakho luvalwe kwinqanaba lokurhoxisa iipesenti ezili-10, unokubeka i-odolo yakho yokulahleka kokuyeka kwi-2%.
Nantsi indlela i-odolo yokuyeka ilahleko isebenza ngayo xa usasaza ukubheja:
Ukuncamathela kwizitokhwe zikaApple, masithi amaxabiso amade angama- $ 250.0- afikelela kuma-250.0 amanqaku
Uthengisa nge-10% margin, efikelela kwi- £ 1,000 yesitokhwe kunye ne- £ 10,000 ubukhulu bezorhwebo
Kodwa, ufuna ukunciphisa iilahleko zakho ukuya kwi-2%
Ukufumana ixabiso lentlawulo yokuphulukana nokuyeka, kufuneka sithathe iipesenti ezi-2 kwixabiso langoku lama-250.0
Iipesenti ezi-2 zeepesenti ezingama-250.0 ngamanqaku ayi-5.0, ke iodolo yethu yokuyeka ilahleko iya kubekwa kumanqaku angama-245.0
Njengoku kungasentla, 'imeko eyeyona imbi' iya kuba zii-Apple stocks ezantsi ngexabiso nge-2%. Ukuba yenzekile, uya kuphulukana ne- £ 200 kwaye urhwebo luya kuvalwa (iipesenti ezi-2 zeepawundi ezingama-10,000 1,000). Nangona usaphulukana nemali, ukuba i-odolo yokumisa ilahleko ibingekho, ubunokuphulukana nomgama wakho wonke- eyi- $ XNUMX.
Ngaba ukusasaza ukuHlawula kungabhatalwa rhafu?
Ngokungafaniyo nesitokhwe sendabuko, ii-CFD, okanye i-forex - ukusasazeka kweenzuzo zokubheja zihlala zikhululwa kwirhafu. Kungenxa yokuba ishishini lijongwa njengokungcakaza, ngokuchasene nokuthengisa okuqhelekileyo.
Kananjalo, ukuba uhlala kwilizwe apho ukuwina ungcakazo kungahlawulelwa rhafu, oku kuyathemba ukuba imeko iyasasazeka ngokubheja. Nangona kunjalo, ucetyiswa ngamandla ukuba ujonge oku kunye nengcali yerhafu kwilizwe lakho.
Uqala njani ukusasaza ukuBheja namhlanje
Ukuba usifundile isikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, kwaye ucinga ukuba ukusasaza ukubheja kulungile kwiinjongo zotyalo-mali lwexesha elide-ngoku siza kukubonisa into ekufuneka uyenzile ukuze uqalise namhlanje.
Inyathelo 1: Fumana i-Spread Broker yokuSasaza
Ukuba ufuna ukusasaza ukubheja kwi-Intanethi, kuyakufuneka ufumane umthengisi ofanelekileyo. Uninzi lwamaqonga okubheja axhasa iiCFDs, ngenxa yoko uya kuba usebenzisa indawo ye-hybrid.
Nangona kunjalo, ngendawo ezininzi zokubheja ezisasazekayo kwindawo ye-Intanethi, kufuneka uqinisekise ukuba iqonga likulungele. Oku kuya kubandakanya iimetrikhi ezinje ngommiselo, iindlela zokuhlawula, izixhobo ezinokuthengiswa, iifizi kunye nenkxaso yabathengi.
Ukukunceda apha endleleni, sidwelise ezintlanu zethu eziphezulu ukusasaza abathengisi bokubheja 2021 ngasezantsi kweli phepha.
Nje ukuba ufumane iqonga lokubheja elisasazekayo elihlangabezana neemfuno zakho, kuya kufuneka uvule iakhawunti. Njengayo nayiphi na indawo yotyalo-mali, inkqubo iya kufuna ulwazi ngawe.
Njengokuba ukubheja kusasazekile yindawo yokutyala imali ephucukileyo, umrhwebi uya kukubuza imibuzo eneempendulo ezininzi ukuze ulinganise amava akho angaphambili. Oku kukuqinisekisa ukuba uyaziqonda ngokupheleleyo iingozi ezinxulumene nokusasaza ukubheja.
Ngaphambi kokuba ubeke urhwebo lwakho lokuqala lokubheja, kuya kufuneka uqinisekise ubungqina bakho. Kwiimeko ezininzi, ungakwenza oku ngokufaka ngokukhawuleza ikopi ecacileyo yepasipoti yakho okanye iphepha-mvume lokuqhuba.
Abanye abarhwebi baya kucela ubungqina bedilesi. Ukuba bayayenza, ungalayisha ingxelo yeakhawunti yakutshanje okanye into oyisebenzisayo.
Ngoku uya kucelwa ukuba uxhase i-akhawunti yakho yokubheja. Uninzi lwamaqonga luya kukucela ukuba uhlangane nesixa esincinci sedipozithi- esihlala sikuluhlu lwe- 50- £ 150.
Ngokweenketho zedipozithi, oku kuhlala kubandakanya oku kulandelayo:
Ngaphandle kokudluliselwa kwiakhawunti yebhanki, iidipozithi zihlala zifakwa kwiakhawunti yakho yokubheja kwangoko.
Nje ukuba ubeke imali, ungabeka indawo urhwebo lwakho lokubheja lokuqala. Ungakhangela kwiimarike ezininzi zokubheja ezisasazwa ngumrhwebi, okanye ngokulula faka isixhobo semali kwibhokisi yokukhangela.
Nje ukuba ufumane iasethi onqwenela ukuyithengisa, kuya kufuneka usete iodolo.
Khetha ixesha elide okanye elifutshane
Faka indawo yakho yenqaku
Vavanya imfuno yomda
Khetha ixabiso lokuyeka ukulahleka kwexabiso
Nje ukuba urhwebo lwakho lubukhoma, unokuluvala nangaliphi na ixesha ngokubeka i-odolo echaseneyo. Umzekelo, ukuba uhambe ixesha elide, beka i-oda emfutshane yokuvala urhwebo- kunye ne-visa versa.
E-UK, kukho iindawo zokuthelekisa ukungcakaza ezifana iisayithi ezintsha zokubheja Uluhlu lwazo zonke iisayithi ezintsha zokubheja ze-2021.
Ufuna ukuqala ukusasaza ukubheja ngoku, kodwa ungaqiniseki ukuba leliphi iqonga oza kulisebenzisa? Apha ngezantsi uyakufumana iindawo zethu ezintlanu eziphambili zokubheja ze2021. Zonke izinto esizikhethileyo zilawulwa kakhulu, zikunika ukufikelela kumawaka ezixhobo zemali, kwaye zikuvumela ukuba ubeke imali ngokulula kwikhadi ledebithi / lekhredithi.
Ukukhetha kwethu okuphezulu kuya kwi-IG. yasungulwa ngo-1974-i-broker esekwe e-UK ibonelela ngee-CFDs, i-forex, kunye nokusasaza urhwebo lokubheja. Ngapha koko, uya kuba nokufikelela kwi-17,000 yeemarike ezizezinye, ezinkulu kakhulu.
Kananjalo, nokuba ujonge ukusasaza imali yokubheja, amasheya, ii-indices, kunye negolide- IG kusenokwenzeka ukuba inentengiso kuwe. Iidipozithi ezincinci ziqala nge- $ 250, kwaye ungayixhasa ngemali iakhawunti yakho ngedebhithi / ikhadi lekhredithi okanye iakhawunti yebhanki. Iqonga lilawulwa yimizimba enelayisensi e-UK, eSingapore nase-Australia.
I-Spreadex yingcali yeqonga lokusasaza eligubungela iimarike zemveli zemidlalo kunye nemidlalo.
Ngaphezulu kwe-10,000 yokubonisa izixhobo zokubheja, uninzi lweeklasi zeeasethi ziyagutyungelwa. Ungabeka ukubheja okusasazekileyo ukusuka kwi-10p nganye ngenqaku, kwaye ubuncinci beedipozithi ziqala nge- $ 1. Iindlela ezininzi zokuhlawula ziyaxhaswa, kwaye umrhwebi ubambe ilayisensi kwi-UKs FCA.
Ngokufana ne-IG, iSalathiso seSixeko ngumrhwebi oneenjongo ezininzi ogubungela ii-CFDs, i-forex, kunye nokusasaza ukubheja. Uya kuba nokufikelela kwiimarike ezingaphezu kwe-8,000, kwaye ukusasazeka kukhuphiswano olukhulu.
Umrhwebi osekwe e-UK ulawulwa kwimida emininzi, kwaye unedumela ekudala lisaziwa ngo-1983. Ungavula iakhawunti ngemizuzu, iidiphozithi ziqala nge- $ 100, kwaye iindlela zokuhlawula ezixhaswayo zibandakanya idebhithi / ikhadi lekhredithi okanye Udluliselo lwebhanki.
Iimpawu zeMarket zeCMC zibonelela ngokubheja ngokubanzi. Oku kubandakanya amawaka eemarike kwizitokhwe, ii-indices, ii-ETFs, amandla, isinyithi esomeleleyo, nkqu nakwii-cryptocurrencies. Yaziswa nge1989, iiMarket zeCMC zilawulwa kakhulu.
Ngaphezulu kwee-commissions ezisezantsi kunye neefizi, iiMarket zeCMC zibonelela ngezixhobo zolawulo lomngcipheko. Oku kuyakuqinisekisa ukuba ugcina ilahleko zakho zokubheja zisasazekile.
I-FXCM yintengiso yexabiso eliphantsi ekusasazeni ukubheja okuvumela ukuba ubeke urhwebo kwi-7p nje kwisibonda ngasinye. Oku kugqibelele ukuba uqalile kwisithuba kwaye unqwenela ukuqala ngezibonda ezincinci.
Umrhwebi uphethe iilayisensi ezininzi zokulawula, kwaye ikwaxhasa i-CFD kunye norhwebo lwe-forex. Iinketho ezininzi zokuhlawula zinikezelwa, kwaye izicelo zeakhawunti zihlala zivunywa kwangoko.
Siyathemba ukuba ngokufunda isikhokelo sethu ngokupheleleyo ngoku unombono wee-360-degree malunga nendlela ekusasazeka ngayo ukubheja. Sigubungele yonke into kwindlela onokuphumelela ngayo kwaye ulahlekelwe yimali xa usasaza ukubheja, izixhobo ezininzi zemali onokuzithengisa, kwaye zeziphi izixhobo zolawulo lomngcipheko onokuzifaka ukunciphisa iilahleko ezinokubakho.
Ekugqibeleni, ngelixa ukubheja kusasazeka kungayi kuba ngumntu wonke, kuyabonelela ngenani lezibonelelo ngaphezulu kwamajelo otyalo-mali emveli. Phambili koku kukurhweba-ngaphandle kwentlawulo okuhlala kukhululwa kwirhafu- kwaye kusasazeka okungahambelaniyo nakwezinye iindawo zotyalo-mali.
Ngokubalulekileyo, qiniseka ukuba uyayiqonda imingcipheko yokusasaza ukubheja ngaphambi kokuba ungene. Emva kwayo yonke loo nto, uninzi lwabathengisi abatsha balahlekelwa yimali xa beqala ukuphuma, ke nyathela ngononophelo.
Ndingathengisa ngantoni xa ndisasaza ukubheja kwi-intanethi?
Ukusasaza amaqonga okubheja kuhlala kukunika ukufikelela kwiiasethi ezifanayo oza kuzithengisa ngeeCFD. Oku kuyakubandakanya yonke into ukusuka kwisitokhwe, ii-indices, izinto zorhwebo, amaxabiso enzala, ii-ETFs kunye nee-cryptocurrensets.
Ndiyenza njani imali xa ndisasaza ukubheja?
Umxholo ophambili kukuvavanya ukuba ingaba i-asethi iyakonyuka okanye yehle kwixabiso xa kuthelekiswa nexabiso langoku lentengiso. Kwinqaku ngalinye 'olichanekileyo, uphumelela isixa esilinganiselweyo kwisibonda sakho.
Lo ngumahluko phakathi kwexabiso 'elide' kunye 'elifutshane' le-asethi- kwaye ichaziwe kumanqaku. Umzekelo, ukuba umahluko ngamanqaku ama-5, kuya kufuneka wenze amanqaku ama-5 ubuncinci ukuze uphule.
Ngaba ukusasaza ukubheja kulawulwa?
Ewe, ukusasaza ukubheja kulawulwa kakhulu ngendlela efanayo neCFD okanye indawo ye-forex. Abalawuli abaphambili babandakanya iFCA (UK), ASIC (Australia), kunye neCySEC (eCyprus).
Zibalwa njani iingeniso kusasazo lokubheja?
Inzuzo isekwe kwindawo yokuqala 'yenqaku ngalinye', kunye nenani lamanqaku urhwebo lwakho olufumene. Umzekelo, ukuba uthengise isitokhwe seApple ngamanqaku angama-200 aphezulu kunokuba ubuhlawule kuqala, kwaye ubeke i- $ 5 ngenqaku ngalinye, ngewenze i- $ 1,000.
Ndingaphulukana njani nomgama wam ekubhejeni okusasazekileyo?
Ukuba urhwebo lwakho luchasene nawe ngepesenti elingana nomda wakho, urhwebo lwakho luya kupheliswa. Umzekelo, ukuba umda wakho uyi-5%, kwaye ixabiso lorhwebo lwakho luyehla nge-5%, urhwebo lwakho luya kuvalwa kwaye umthengisi uya kugcina idiphozithi yakho yomda.
Ndiyifumana njani imali kwiakhawunti yam yokubheja?
Kwinqanaba elincinci, ukusasaza iindawo zokubheja zihlala zikunika ithuba lokufaka imali nge-debit / ikhadi lekhredithi okanye i-akhawunti yebhanki. Abanye bavumela ii-e-wallets ezinje nge-Paypal kunye ne-Skrill.